DEG DEG:-Xildhibaan ka tirsan Puntland oo Goor dhow geeriyooday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG DEG:-Xildhibaan ka tirsan Puntland oo Goor dhow geeriyooday
Ardaan Yare 6 March 2021
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka dowlad Goboleedka Puntland ayaa Goordhow ku geeriyooday Isbitaal ku yaalla degmada Badhan ee Gobolka Sanaag, sida ay sheegayaan wararka aan halkaas ka heleyno.
Xildhibaan Cali Axmed Dhahar ayaa shil gaari ku galay duleedka degmada Badhan, isla markaana waxaa soo gaaray dhaawac culus oo la dhigay Isbitaal, hayeeshee daqiiqado kahor ayuu u geeriyooday dhaawicii soo gaaray.
Geerida Marxuum Cali Axmed ayaa waxaa xaqiijiyay qaar kamid ah Eheladiisa iyo Xildhibaan hore uga tirsanaa Baarlamaanka Puntland Dhoorre oo ku sugan Isbitaalka uu ku dhintay Xildhibaan Cali.
Warar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Marxuum Cali Axmed Dhahar xiliga uu shilka ku galaayay duleedka degmada Badhan ee Gobolka Sanaag uu kusii jeeday tacsida hooyadiis oo dhimatay.
Golaha Wasiirada oo kulan Deg-deg ka yeeshay xaaladdo adeg oo ka jira dalka
Ciidanka Puntland oo guluf dagaal ka wada duleedka Boosaaso, kadib markii…